Uma ukhetha zokwakha, thina uqhubekele kusuka izindlela ezahlukene, kodwa izimfuneko eziyinhloko ephezulu, ukuqina kanye ukuyikhokhela. Zonke lezi zidingo zifeziwe ngumuntu yesimanje ukwahlukanisa kanye ungangenisi amanzi polyurethane foam, izimfanelo okuyinto enze kube nokwenzeka ukuba silisebenzise emikhakheni ehlukahlukene. Ngaphezu kwalokho, izinhlobo Foam kabanzi ukudalwa ngawomatilasi nempahla yasendlini, okhombisa high quality nokuphepha izinto.
Ukuze uqale, siphawula ukuthi lesi okokusebenza sisikhulu ngenxa yokuthi bakwazi ukufeza sekugcineni yiziphi izakhiwo, ngaleyo ndlela uyokwazi ukulondoloza ku imali esikhathini esizayo. Izici ehlukile lokhu ukwahlukanisa yilezi:
ukuphepha Environmental futhi okungezona ezinobuthi: lokhu kuqinisekiswa ukuhlolwa okuphindiwe impahla.
Wafutha polyurethane foam Kulula ukusebenzisa kanye nezindleko engabizi.
Ukwandisa ezishisayo ukwahlukanisa izakhiwo, okuyinto kunciphisa nezindleko ezengeziwe Ukushisa izakhiwo-40%.
Ukuvikeleka wokusebenza: PPU ingahlala iminyaka 30-40, ngaphandle kokulahlekelwa e nezici zabo.
Ekusetjentisweni kwemandla ngalokuyimphumelelo, okuyinto bunikezwa ukungabi khona amalunga, ezivuzayo, amabhuloho ezishisayo.
Kusukela ukwahlukanisa sisetshenziswa by sishaye, asikho isidingo ukusebenzisa iziqobosho. Lokhu kusho ukuthi ngeke yakha amabhuloho abandayo, futhi isakhiwo ngeke sigcine ubuqotho ngokuhamba kwesikhathi.
Foam olumelana umlilo, okuyilona elisebenzayo futhi kubaluleke kakhulu.
Polyurethane ukushisa ezahlukene kanye frost ukumelana naso futhi kwenze kungenziwa eziqhutshwa at okushisa ezisukela -70 kuya +130 degrees.
Amelana chemical ezindaweni, petrols, amafutha, bitumens, upende.
Polyurethane foam: izici lobuchwepheshe
Indaba ine izici ezilandelayo Foam polyurethane. Okokuqala, Foam has adhesion ezinhle, adhesion okusho ukuthi evele ezahlukene. Okwesibili, enamathela polyurethane okuhlala isikhathi eside - kuso angaya ngokuphepha. Okwesithathu, ngenxa isisindo ongaphakeme ayikhuphuki umthwalo isakhiwo isakhiwo. Okwesine, PPU sikhona yonke indawo, ngenxa yokuthi ihlanganisa imisebenzi umusi isithiyo futhi ungangenisi amanzi izinto. Ngakho, uma usebenzisa it yakha isendlalelo moya emelanayo amanzi kanye nomoya.
polyurethane foam impahla kunganciphisa isikhathi etholakalayo ezishisayo umsebenzi ukwahlukanisa, ungqimba enamathela etholwe ubuqotho ngaphandle amalunga izikhala. Lokhu kusho ukuthi ebusweni ngeke kamuva igoqe ngaphansi amathonya ahlukahlukene.
PPU kabanzi for ukwahlukanisa ekwakheni izindlu, ukwahlukanisa sound futhi ezishisayo of izakhiwo zezimboni kanye wemibango ukwahlukanisa ezibandayo yombango ifriji izinhlelo, ukuthuthukisa ukuphepha buoyancy ugodo enikeziwe ingxubevange phezu kwamanzi. Ngakho, igwebu polyurethane sinezici ezihlukahlukene, okuvumela ukusetshenziswa kwento emikhakheni ehlukahlukene.
Mangisho ukuthi zonke izinto wafutha kunezimo eziningana ezisivunayo:
ukukhonza yisivikelo ukugqwala metal;
Bayisibonelo esihle ungangenisi amanzi, ukwahlukanisa;
libhekene adhesion ezinhle kunoma iyiphi indawo;
Polyurethane foam, izici kabani ngokomzimba zihlukene kangaka, esetshenziselwa ifriji. Inhloso yayo - ukwehlukanisa walling, amapayipi okuyinto bafakela liquid nitrogen kanye ammonia. Uma udala izingxenye olubunjiwe izimoto, nezimo, thermoformable, lulwimi esingashintshi, futhi kubalulekile ukwenziwa izingxenye olubunjiwe. Isetshenziswa impahla nokudala izakhi ezihlukahlukene zokuhlobisa ifenisha.
PPU e umkhakha ukukhanya
Kulokhu kuthandwa kakhulu polyurethane foam kumatilasi. izici Material kulokhu zimi kanje:
ukuhlinzekwa izakhiwo wamathambo;
ezihlukahlukene imifanekiso ngawomatilasi - ne iziphethu, ngongqimba eziningana, noma nge-geometry Ushintshe komkhiqizo.
Ngo umkhakha ukukhanya okusekelwe polyurethane esetshenziswa ukwenziwa zokwenziwa Leathers, futhi okubili izicubu. Kudingeka izinto futhi ujantshi imoto futhi izindiza uma udala eliphezulu emaceleni amelana amalangabi.
Ukusatshalaliswa enkulu yatholwa polyurethane foam kumatilasi. Izimfanelo le nto iyona engcono nalezi zidingo abakhiqizi zokulala njengoba kodwa neze kunabayeni ngekhwalithi ngezinto zemvelo, futhi intengo kunenzuzo kakhulu lokukhetha ukuthi. Ukusebenzisa PPU ezifanele, ngoba uhluke womshini omatilasi:
I engavamile kwezingxenye elithambile, omatilasi yayo ukhululekile ngakho etholakala kanye nokuhlinzeka ukuhlala ukhululekile. Ngaphezu kwalokho, lokho akusho baxabane nomzimba, ngokulandelana, kungenzeka ukubeka umantilasi nursery, futhi kulelo gumbi, ikhehla elithile.
Foam for ifenisha
Ifenisha womshini - enye indawo lapho izinto asebenzayo sisetshenziswa kabanzi, ukufuneka nansi nokunwebeka polyurethane foam. Ngokokuqala ngqá le nto idalwe ku 30s eJalimane, futhi namuhla ekhiqizwa izinhlobonhlobo okokusebenza asetshenziswe ekukhiqizeni ngawomatilasi nempahla yasendlini. Ngenxa high quality polyurethane foam ingasetshenziswa ukuklama esishintshashintshayo ezahlukene ifenisha upholstered, lapho kwabantu nokuqina, okuyinto zivikela amagciwane. PUF kabanzi sisetshenziswa ukudalwa yokubeka kanye headrests, kanye isihlalo, ayanda ikhwalithi feedstock, isikhathi eside into.
Izici Foam nokunwebeka
Nezimo polyurethane foam has a degree ezahlukene ubulukhuni, ngakho-ke kufanele kukhethwe kuye ngenjongo. Ngokwesibonelo, polyurethane foam umsungulo okusezingeni eliphezulu e ukufunwa ifenisha, lapho azikho iziphethu. Ukuvumelana nezimo futhi udlala indima enkulu, ngoba lokhu isici kuncike inhlanganisela flooring, ezifana isihlalo. Kubalulekile futhi ukuthi Foam polyurethane ihlangabezana nezidingo zokuphepha, njengoba ifenisha ngayinye echayeke izifundo kwendle. Uma udinga noma yikuphi izakhi ezithambile bunjwa eziyinkimbinkimbi, a Foam ekhethekile olubunjiwe, okudaliwe ngesimo ngokunemba high.
Ukuze ifenisha polyurethane foam kabani izici zihlukene kangaka, uzilungiselele ngokuxubanisa polymers ahlukahlukene nge zokwenziwa substrate. I engavamile walesi yamathebhu ifenisha:
lamadigri ukuqina obuhlukahlukene;
zifudumele polyurethane foam
Polyurethane kabani Ukucaciswa Uvula amathuba ukusetshenziswa kwaso emikhakheni ehlukahlukene, kwakhiwa ngokuxuba izingxenye ezimbili liquid - polyol futhi isocyanate. Lapho ukufakwa odongeni ukwahlukanisa izinto ngezindlela ezimbili - by sishaye noma ukuthelwa. On ukusetshenziswa esihle Foam njengoba ukwahlukanisa impahla zihlanganisa lezi ezilandelayo:
Material polyurethane foam ilungele izindonga, ophahleni, phansi, futhi isebenza nabo kungaba kwenziwe kokubili ekhaya nangaphandle.
Polyurethane isicelo kokuphothula noma iyiphi indawo.
ukumelana ezihlukahlukene zamakhemikhali - acid kanye alkalis.
Amandla usebenze kuzo zonke izimo lokushisa.
amandla mechanical okuphezulu.
Wafutha polyurethane foam ithobela kahle kunoma iyiphi indawo, kungaba ukhonkolo, izitini noma ukhuni. Ukugcwalisa zonke imifantu nemifantu namafomu impahla eziqinile enamathela Monolithic. Lapho usebenzisa i-sishaye endlini yokuqedela Uhlaka inikezwa yi Ukuvikelwa baso engibukhulumile ukugqwala, ngaphandle polyurethane foam linamandla ukubola, isikhutha, nezilwanyana ezincane.
Kabanzi polyurethane foam ukwahlukanisa kwezindlu. izici Technical okuhle yayo, kodwa noma kunjalo kukhona eziningi umehluko wemisindo nemiqondo yamagama ukuthi kufanele kunakwe lapho uyisebenzisa. I ethile eyinhloko - zibiza kakhulu umsebenzi, ikakhulukazi uma umeme Ochwepheshe nge imishini. Iphuzu lesibili - uma izibani Foam, umlilo ezingenza ukuba axoshwe, kepha okokusebenza ngokwawo isikhathi eside asizange sibe izicucu futhi zikhipha izinto elimazayo. Eyesithathu - ukulinganiselwa kuphela yangaphandle, uma usebenzisa i-polyurethane foam ukwahlukanisa. Izici zikuvumela ukuyisebenzisa iyiphi indawo, kodwa kubalulekile ukucabangela indlela indaba oyokwenziwa yokuqedela olwengeziwe.
Yini iseluleko lochwepheshe?
Wall ukwahlukanisa usebenzisa polyurethane foam kungaba kwenziwe ngabantu bangaphandle kuphela.
Ngaphakathi endlini kumele ubavikele esiphezulu ukwahlukanisa kusuka umswakama, ukukhanya kwelanga.
Uma ukufudumala Uhlaka izindonga, ingaphakathi kumele ngokuphelele uphawu nendaba yokuqedela singenalo angena umoya endlini.
Polyurethane foam: izici, umthengi Izibuyekezo
Kabanzi le nto ngoba kokuqeda ophahleni, futhi nazi izinhlobo ezimbili ezidumile ke - enwebekayo kanzima. Eyokuqala ine Pore isakhiwo evulekile lapho ngaphakathi ligcwele umoya noma-carbon dioxide. Lokhu kwaziswa okuhle ukuthi uvumela ukufeza okusezingeni eliphezulu umsindo ukwahlukanisa isikhala nge ongaphakeme ezishisayo conductivity Coefficient. Ngesandla Esiqinile polyurethane foam elinesimo cell isakhiwo avaliwe, lapho 3% ukudla okuqinile, ngenkathi ivolumu ezisele - iseli. Ngenxa high density kwale nto abantu abaningi ezifunwayo embonini yezokwakha.
Izinto ukuze zihlale zifudumele kohlelo ophahleni, kunezindlela eziningi, kodwa ukuthandwa okwandayo polyurethane foam. izici ngokuqhathanisa evamile amaminerali uvolo ukukhuluma esivuna kukhethwa indaba yokuqala kanye nezici ehlukile ukwahlukanisa ukufulela Foam zihlanganisa:
Indaba engasindi futhi akusho deform ngesikhathi operation okuqhubekayo.
Ngenxa isakhiwo ukungena nakwamanye amazwe inikeza isivikelo esihle umswakama.
Lapho polyurethane foam ukwahlukanisa kungaba kakhulu ukunciphisa nokushisa.
Ngo kokuhlinzwa, impahla akusho ukukhulula izinto eziyingozi.
Kubalulekile ukuthi i-ukwahlukanisa polyurethane foam ayidingi ukuqaqa ngokuphelele isakhiwo njengoba sisetshenziswa ngokushesha futhi kalula kunoma iyiphi indawo. Futhi, akadingi pre-ukulungiselela kobuso umsebenzi, ngoba igwebu ngokwayo abhekana nazo zonke semfene yayo. Umdwebo ababulawa imishini ekhethekile, ngakho-ke akudingekile ukuba usike slabs yezimbiwa uvolo, bese uvumelane nabo komunye nomunye.
ukwahlukanisa Ngokusobala kungenziwa ngezindlela ezimbili - ngokuthulula noma ukufafaza. Indlela yokuqala muhle ngoba ikuvumela ukuba asingathe noma yisiphi isimo sezwe kanye kunoma yiziphi isimo sayo. Ngakho, kungaba ukuhlela ngokuphepha ezahlukene lwaleli ziboya ikholomu. Le ndlela muhle futhi uma usebenza ezindaweni okunzima, ngaphansi sokubuyiselwa. zifudumele kulokhu kuyoba high, ubuqotho, njengoba bonke ezivuzayo nezihlanganiso okwenziwa. Futha polyurethane foam kwenziwa imishini ekhethekile, kwabantu elibanzi ungqimba isicelo.
Ngakho, ihluke kakhulu izici ezibonakalayo kwama-Foam polyurethane. Ukuze ifenisha, isibonelo, isifuthefuthe zenye, ngoba ukufudumala - kuhluke ngokuphelele. Futhi uma esimweni sokuqala, okunye kulokhu kwaziswa nje akanawo, esimweni zifudumele kwezindlu kungenziwa kukhethwe ezihlukahlukene ongakhetha. Futhi bonke abakhi yesimanje, futhi nakulabo abahileleka zifudumele angaphansi ezindlu zabo eziyizitezi bebodwa, uthanda yona Foam. Okokuqala, kungenxa engabizi. Okwesibili, isicelo kalula futhi ngezindlela eziningana, okuvumela ukuba ukhethe isixazululo eliphezulu umsebenzisi ngamunye. Okwesithathu, nesicelo efanele Ungashiyi amalunga ezivuzayo ukuba uphawu priori kusetshenzwe. Lokhu kusho ukuthi ekhaya lakho nakanjani kube efudumele. Ayikho quality omatilasi kancane zigcwele polyurethane foam, okuyinto ephinda ekhuluma esivuna choice yakhe.
Alamu umgqekezi kuleli zwe: Ukukhetha, imfundo, ukufakwa
Ukudla ngokufanele ukuze engaphathekile wamathumbu syndrome ne ukuvuvukala
Shmitovsky. Moscow, Shmitovsky
Quest ku Nouble, "Interlude"
Malikova Inna: Biography, umsebenzi kanye nokuphila siqu
Funny - Phansi nge conservatism
Hlobo luni Inyoni okuthiwa i-"Isihlahla se-oki umhlwanyeli"?
Ibhalansi ye isikhathi tekuhlala nekusebenta kwetisebenti phezu 2014, 2015